Kumkani Yeekumkani - Hillsong ngesiXhosa
"The story of the Gospel should never be treated or viewed as a relic - no matter how reverently one might err in that direction. No, the Gospel is a NOW reality that requires a NOW response. With origins before time and echoes beyond it, it stands at the intersection of eternity and our every-day present and beckons, urges, demands us to look. Look at the Christ, the Son of God - bloodied for your sin and the sin of all humanity - repent and believe and take your place in the Story of all stories - the story of the King of Kings."
“Ibali levangeli alifanelanga ukuba lijongwa okanye libonwa njengentshiyekela esele ngasemva - nokuba ubani wenje-njalo ngentlonelo engakanani. Hayi, ivangeli yinto YANGOKU efanelwe yintshukumo YANGOKU. Linemvelaphi yamandulo eyodlula indalo, lime phakathi kwanaphakade nangoku lisibiza, linyazelisa ukuba masiphakamise amehlo sijonge. Jonga uKristu, uNyana kaThixo - ebomvu ligazi ngenxa yezono zakho nezono zehlabathi lonke - guquka ukholwe uthabathe indawo yakho kwimbali yeembali- ibali leKumkani yeekumkani.”
“Kuba andinazintloni ngazo iindaba ezilungileyo zikaKristu; kuba zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo, umYuda kuqala, kwanomGrike. Kuba ngazo kutyhilwa ubulungisa bukaThixo, buphuma elukholweni buse elukholweni, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, ‘Olilungisa ke uya kudla ubomi ngokokholo.’” - KWABASEROMA 1:16-17
- Brooke Ligertwood
Hillsong is passionate about creating music that resounds from villages and tribes to great cities and nations drawing people to worship the King of Kings. Our prayer is that Xhosa recordings of these songs through Hillsong in Xhosa will be a blessing to individuals and churches alike, as they worship Jesus Christ in spirit & in truth.
Hillsong izimisele ngokwenza umculo ovakala ezilalini, kwiintlanga, ukuya kutsho ezidolophini nezizwe, imemezela abantu ekunquleni iNkosi yamakhosi. Umthandazo wethu kukuba ukutolikwa kwezi ngoma ngesiXhosa kuza kuba yintsikelelo kumntu ngamnye, nakwiicawe ngokunjalo, xa benqula uYesu Kristu ngoMoya nangenyaniso.